ယောင်းတို့နှလုံးသားကို ထိရှသွားစေမယ့် Joox Myanmar Top Chart က သီချင်း(၅)ပုဒ် - For her Myanmar
သီချင်းသံစဉ်လေးတွေနဲ့ စီးမျောရင်း ခံစားချက်တွေ အသက်သွင်းနိုင်စေဖို့
ဘယ်နေရာပဲသွားသွား နားကြပ်လေးနားထဲထည့်ပြီး သီချင်းသံနဲ့ စီးမျောရတာ ဝါသနာပါတဲ့ယောင်းတို့ လက်ညှိုးထောင်.. မင်မင်အခုဝေမျှပေးမှာက ဒီလိုသီချင်းချစ်သူ ယောင်းလေးတွေကို သံစဉ်အသစ်လေးတွေနဲ့ သာယာနိုင်စေမယ့် Joox ရဲ့ Myanmar Top Chart 100 ထဲက သီချင်းကောင်းလေးတွေ အကြောင်းပါ.. တစ်ခါနားထောင်လိုက်တာနဲ့ နားထဲမှာရော နှလုံးသားထဲမှာပါ စွဲထင်ကျန်ရစ်ပြီး ထပ်ကာတလဲလဲ နားထောင်ဖြစ်စေမယ့် သီချင်းလေးတွေမို့ ယောင်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်မှာ သေချာပါတယ်…
ယောင်းတ်ို့အသည်းစွဲ Project K အဖွဲ့ရဲ့ Love ဆိုတဲ့သီချင်းလေးပါ.. မြင်မြင်ချင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကို အဖြေတောင်းတဲ့ ပုံစံလေးကို ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့လေးနဲ့ “နင်မကြင်နာရင် သေမှာ” ဆ်ိုပြီး ချွဲနွဲ့ပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းအောင် သီဆိုထားတာမို့ ယောင်းတို့နှလုံးသားကို တိုက်ရိုက်ထိမှန်ဦးမယ့် သီချင်းလေးပါနော်…
Related Article >>> အဟောင်းတွေ အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ထိ ဖီးလ်သွားစေမယ့် မိုးရာသီ အဆွေးသီချင်း(၅)ပုဒ်
ဒီသီချင်းလေးကတော့ X Box ရဲ့ စိတ်ကောက်နေတဲ့ ချစ်သူလေးကို “အတ္တတွေများတဲ့ ငါ့ရဲ့အချစ်က မင်းအတွက်ခါးတယ် ၊ အကြိမ်များစွာ မင်းကိုထားခဲ့တဲ့ ငါ့ကိုမသနားနဲ့ ပြန်လည်နီးစပ်ဖို့ အခွင့်အရေးမရှိတဲ့ အရူးတစ်ယောက် ထိုင်ဆွေး ” ဆိုပြီး ကောင်မလေးသနားအောင် စကားလမ်းကြောင်းပြီး ပြန်ချော့တဲ့အကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားတာမို့ စိတ်ကောက်နေတဲ့ စုံတွဲလေးတွေနဲ့ ခံစားချက်ချင်း တိုက်ဆိုင်စေမယ့် သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါနော်…
ယောင်းတို့အချစ်တော် ဘီးကြဲ စိုင်းစိုင်းနဲ့ အသံချိုချိုလေးနဲ့ သီဆိုတတ်တဲ့ အဆိုတော်မလေး အမရာဖုန်းတို့က ချစ်သူကို နာကျည်းမုန်းတီးသွားတဲ့အကြောင်း ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုပေးထားတာပါ.. “ငါချစ်ခဲ့ဖူးသူပါ.. ငါနင့်အတွက်အသက်ရှင်ခဲ့လည်း နာကျည်းတဲ့မျက်ရည်စက်တွေနဲ့လေ အကုန်ပြိုလဲပြီ.. ငါနင့်ကိုမုန်းတယ်ဆိုပြီး ” ခါးခါးသီးသီးမုန်းတီးသွားတဲ့အကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားတာမို့ အသည်းကွဲနေတဲ့ ယောင်းတို့ဖီးလ်လို့ အရမ်းကောင်းမှာသေချာပါတယ်…
Related Article >>> YouTube ရဲ့ကြည့်ရှုသူအများဆုံး ထိပ်တန်းသီချင်း (၁၀) ပုဒ်
Pop သီချင်းချိုချိုလေးတွေနဲ့ နေရာယူခဲ့တဲ့ တေးသံရှင်ဇော်ပိုင်ရဲ့ သီချင်းလေးကို Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာTop Ten ဝင်ခဲ့တဲ့အဆိုတော် စောထက်နိုင်စိုးက သူ့ရဲ့ ဆွေးမြေ့တဲ့အသံလေးနဲ့ တစ်ဖန်ပြန်လည် ဆန်းသစ်သီဆိုထားတာပါ.. နာမည်ကြီးပြီးသားသီချင်းလေးကို မူဟန်အသစ်လေးနဲ့ ပြန်လည်ခံစားရစေမယ့် သီချင်းကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ…
ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ လူငယ်ပရိသတ် တော်တော်များများ လက်ခံအားပေးနေကြတဲ့ Oasix နဲ့ KMH တို့ကသီဆိုထားတာပါ… လမ်းခွဲပြီးသားချစ်သူလေးကို အဆင်ပြေရဲ့လား.. ပျော်ရဲ့လားလို့ မေးခွန်းတွေမေးပြီး “ကိုယ်ရဲ့ဘဝကို အသုံးချဖို့ဆို မင်းလေးကြိုက်တာပြော“ ဆိုပြီး ချစ်သူအဆင်ပြေမယ်ဆို ပေးဆပ်ပေးချင်တဲ့အကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားလို့ ချစ်သူအတွက် အရာရာပေးဆပ်ချင်တဲ့ ယောင်းတို့အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျစေမှာပါ….
ကဲ.. မင်မင်ကတော့ ယောင်းတို့အတွက် သီချင်းကောင်းလေးတွေကို Joox ကနေရှာဖွေပေးပြီးပြီဆိုတော့ နားကြပ်လေးနားထဲထည့်ပြီး စီးမျောဖို့က ယောင်းတို့တာဝန်ဖြစ်သွားပါပြီ… ချိုမြိန်တဲ့သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ရင်း ဘဝအမောတွေ ပြေပျောက်နိုင်ကြပါစေနော်..
သီခငျြးသံစဉျလေးတှနေဲ့ စီးမြောရငျး ခံစားခကျြတှေ အသကျသှငျးနိုငျစဖေို့
ဘယျနရောပဲသှားသှား နားကွပျလေးနားထဲထညျ့ပွီး သီခငျြးသံနဲ့ စီးမြောရတာ ဝါသနာပါတဲ့ယောငျးတို့ လကျညှိုးထောငျ.. မငျမငျအခုဝမြှေပေးမှာက ဒီလိုသီခငျြးခဈြသူ ယောငျးလေးတှကေို သံစဉျအသဈလေးတှနေဲ့ သာယာနိုငျစမေယျ့ Joox ရဲ့ Myanmar Top Chart 100 ထဲက သီခငျြးကောငျးလေးတှေ အကွောငျးပါ.. တဈခါနားထောငျလိုကျတာနဲ့ နားထဲမှာရော နှလုံးသားထဲမှာပါ စှဲထငျကနျြရဈပွီး ထပျကာတလဲလဲ နားထောငျဖွဈစမေယျ့ သီခငျြးလေးတှမေို့ ယောငျးတို့ကွိုကျနှဈသကျမှာ သခြောပါတယျ…
ယောငျးတို့အသညျးစှဲ Project K အဖှဲ့ရဲ့ Love ဆိုတဲ့သီခငျြးလေးပါ.. မွငျမွငျခငျြးစိတျဝငျစားခဲ့တဲ့ ကောငျမလေးကို အဖွတေောငျးတဲ့ ပုံစံလေးကို ဖှဲ့ဖှဲ့နှဲ့နှဲ့လေးနဲ့ “နငျမကွငျနာရငျ သမှော” ဆိုပွီး ခြှဲနှဲ့ပွီး ခဈြဖို့ကောငျးအောငျ သီဆိုထားတာမို့ ယောငျးတို့နှလုံးသားကို တိုကျရိုကျထိမှနျဦးမယျ့ သီခငျြးလေးပါနျော…
Related Article >>> အဟောငျးတှေ အသဈဖွဈလာတဲ့ထိ ဖီးလျသှားစမေယျ့ မိုးရာသီ အဆှေးသီခငျြး(၅)ပုဒျ
ဒီသီခငျြးလေးကတော့ X Box ရဲ့ စိတျကောကျနတေဲ့ ခဈြသူလေးကို “အတ်တတှမြေားတဲ့ ငါ့ရဲ့အခဈြက မငျးအတှကျခါးတယျ ၊ အကွိမျမြားစှာ မငျးကိုထားခဲ့တဲ့ ငါ့ကိုမသနားနဲ့ ပွနျလညျနီးစပျဖို့ အခှငျ့အရေးမရှိတဲ့ အရူးတဈယောကျ ထိုငျဆှေး ” ဆိုပွီး ကောငျမလေးသနားအောငျ စကားလမျးကွောငျးပွီး ပွနျခြော့တဲ့အကွောငျး ရေးဖှဲ့ထားတာမို့ စိတျကောကျနတေဲ့ စုံတှဲလေးတှနေဲ့ ခံစားခကျြခငျြး တိုကျဆိုငျစမေယျ့ သီခငျြးကောငျးလေး တဈပုဒျပါနျော…
ယောငျးတို့အခဈြတျော ဘီးကွဲ စိုငျးစိုငျးနဲ့ အသံခြိုခြိုလေးနဲ့ သီဆိုတတျတဲ့ အဆိုတျောမလေး အမရာဖုနျးတို့က ခဈြသူကို နာကညျြးမုနျးတီးသှားတဲ့အကွောငျး ခံစားခကျြအပွညျ့နဲ့ သီဆိုပေးထားတာပါ.. “ငါခဈြခဲ့ဖူးသူပါ.. ငါနငျ့အတှကျအသကျရှငျခဲ့လညျး နာကညျြးတဲ့မကျြရညျစကျတှနေဲ့လေ အကုနျပွိုလဲပွီ.. ငါနငျ့ကိုမုနျးတယျဆိုပွီး ” ခါးခါးသီးသီးမုနျးတီးသှားတဲ့အကွောငျး ရေးဖှဲ့ထားတာမို့ အသညျးကှဲနတေဲ့ ယောငျးတို့ဖီးလျလို့ အရမျးကောငျးမှာသခြောပါတယျ…
Related Article >>> YouTube ရဲ့ကွညျ့ရှုသူအမြားဆုံး ထိပျတနျးသီခငျြး (၁၀) ပုဒျ
Pop သီခငျြးခြိုခြိုလေးတှနေဲ့ နရောယူခဲ့တဲ့ တေးသံရှငျဇျောပိုငျရဲ့ သီခငျြးလေးကို Myanmar Idol သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲမှာTop Ten ဝငျခဲ့တဲ့အဆိုတျော စောထကျနိုငျစိုးက သူ့ရဲ့ ဆှေးမွတေဲ့အသံလေးနဲ့ တဈဖနျပွနျလညျ ဆနျးသဈသီဆိုထားတာပါ.. နာမညျကွီးပွီးသားသီခငျြးလေးကို မူဟနျအသဈလေးနဲ့ ပွနျလညျခံစားရစမေယျ့ သီခငျြးကောငျးလေး တဈပုဒျပါ…
ဒီသီခငျြးလေးကိုတော့ လူငယျပရိသတျ တျောတျောမြားမြား လကျခံအားပေးနကွေတဲ့ Oasix နဲ့ KMH တို့ကသီဆိုထားတာပါ… လမျးခှဲပွီးသားခဈြသူလေးကို အဆငျပွရေဲ့လား.. ပြျောရဲ့လားလို့ မေးခှနျးတှမေေးပွီး “ကိုယျရဲ့ဘဝကို အသုံးခဖြို့ဆို မငျးလေးကွိုကျတာပွော“ ဆိုပွီး ခဈြသူအဆငျပွမေယျဆို ပေးဆပျပေးခငျြတဲ့အကွောငျး ရေးဖှဲ့ထားလို့ ခဈြသူအတှကျ အရာရာပေးဆပျခငျြတဲ့ ယောငျးတို့အကွိုကျနဲ့ ထပျတူကစြမှောပါ….
ကဲ.. မငျမငျကတော့ ယောငျးတို့အတှကျ သီခငျြးကောငျးလေးတှကေို Joox ကနရှောဖှပေေးပွီးပွီဆိုတော့ နားကွပျလေးနားထဲထညျ့ပွီး စီးမြောဖို့က ယောငျးတို့တာဝနျဖွဈသှားပါပွီ… ခြိုမွိနျတဲ့သီခငျြးလေးတှေ နားထောငျရငျး ဘဝအမောတှေ ပွပြေောကျနိုငျကွပါစနေျော..
Tags: Chart, Fun, Heart, joox, Music, myanmar, Singer, touch